၎င်းသည် အီတလီဈေး Ventis | စပိန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
စတိုင်လ်အမျိုးသားများ | 02/11/2021 11:20 | အဆင့်မြှင့်တင် 04/11/2021 20:11 | ပုံ, သဘောထားတွေ
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က စပိန်နည်းပညာနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတိုင်ပင်ခံ Making Science သည် နာမည်ကြီး အီတလီစျေးကွက်ဖြစ်သော Ventis ကို ဝယ်ယူခဲ့သည်။ လက်တွေ့တွင်ဃ၊ ဒီပလက်ဖောင်းက ရှိပြီးသားပါ။ စပိန်မှာ အပြည့်အဝလည်ပတ်နေပါတယ်။.
ဤဆောင်းပါးတွင် သိပ္ပံပညာဖန်တီးခြင်းဖြင့် ဤစျေးကွက်ကိုရယူခြင်းဆိုင်ရာ သော့များအားလုံးကို သင့်အား ပေးဆောင်ထားပြီး ၎င်းတွင် အဘယ်အရာပါဝင်သည် Ventis.
အဆိုပါအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြည့်စုံဆုံးသော ဥရောပစျေးကွက်များထဲမှ တစ်ခုကို ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။. Ventis သည် ဖက်ရှင်၊ အိမ်နှင့် အစာအိမ်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများမှ ဆောင်းပါးအမျိုးမျိုးကို ရောင်းချသည်။ ဤပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ပင်မအီတလီအမှတ်တံဆိပ်များသာမက အခြားစပိန်၊ အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်နှင့် အခြားနိုင်ငံများမှ ဆောင်းပါးများကို သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
Ventis သည် 2016 ခုနှစ်တွင်ဖန်တီးခဲ့ပြီး ICCREA အဖွဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး ဤငါးနှစ်တာကာလအတွင်းအီတလီတွင် အများဆုံးရောက်ရှိနေသည့် ငွေကြေးအဖွဲ့များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်အတောအတွင်း၊ Marketplace သည် အီတလီဖောက်သည်များနှင့် အခြားနိုင်ငံမှ ဖောက်သည်များအတွက် အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းပေါ်တယ်အဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ တည်ထောင်ထားသည်။
တကယ်တော့၊ 2020 တွင် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသော်လည်း Ventis သည် Diners Club သို့မဟုတ် Sky Italia ကဲ့သို့သော အမှတ်တံဆိပ်များမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိသည့် စျေးကွက်အပေါ်အခြေခံ၍ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သစ္စာရှိမှုစနစ်ကြောင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သစ္စာစောင့်သိမှုစနစ်ကြောင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါတို့အတွက် တစ်ခုခု ရှင်းနေတယ်ဆိုရင် အဲဒါပါပဲ။ အီတလီဖက်ရှင်နှင့် အလှဆင်မှုသည် ကျက်သရေရှိမှုနှင့် တူညီသည်။. ဤနိုင်ငံတွင် လူသိများသော အမှတ်တံဆိပ်အချို့မှာ Diesel၊ Armani၊ Roberto Cavalli သို့မဟုတ် Moschino ဖြစ်သည်။ ဤကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်များအား Ventis မှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏အဝတ်အစားများနှင့် ပစ္စည်းများကို ပေးဆောင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဤပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင်၊ Guess၊ The North Face၊ Ralph Lauren၊ Puma သို့မဟုတ် Adidas ကဲ့သို့သော စီးပွားရေးနှင့် လူကြိုက်များသော အခြားအမှတ်တံဆိပ်များကို သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
သတင်းများနှင့် သီးသန့်ကမ်းလှမ်းချက်များကို ရှာဖွေနိုင်ခြေကို အာမခံရန်၊ Ventis ကျွမ်းကျင်သူများသည် စီးပွားဖြစ်သဘောတူညီချက်များပိတ်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ မတူညီသောကမ်းလှမ်းချက်များကို နေ့တိုင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဖန်တီးနိုင်ကြသည်။ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများဖြင့် ဆောင်းပါးများနှင့် အထည်များ၏ အမှတ်တံဆိပ်အစုံပါသော ကတ်တလောက်တစ်ခု.
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Ventis သည် အီတလီဝိုင်များဝယ်ယူရန် အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းလည်းဖြစ်သည်။ "Gourmet" ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဝိုင်၊ ဆီများ၊ ဖျော်ရည်များ၊ ခေါက်ဆွဲနှင့် ပန်းကန်ဆေးပစ္စည်းများကဲ့သို့သော အစာအိမ်နှင့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များစွာ။ ဤသည်မှာ အီတလီနိုင်ငံထုတ် တံဆိပ်ပါသော ထုတ်ကုန်များကို နှစ်သက်သူများအတွက် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Ventis တွင် အ၀တ်အစားများမှ လူသိအများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များမှ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ မျက်နှာသုတ်ပဝါများ၊ ဥယျာဉ်ပရိဘောဂများ၊ ဝိုင်နှင့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များအထိ လက်တွေ့ကျကျဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်ဘာတွေလဲ၊ ဤပေါ်တယ်တွင်ပုံမှန် ၀ ယ်သူများသည်အထူးအခြေအနေများကိုခံစားလိမ့်မည်။.
ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်နှစ်အတွင်း ပေါ်တယ်တွင် ယူရို 1.000 ထက်ပိုသုံးစွဲသော သုံးစွဲသူများအားလုံးသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး အခမဲ့ ပို့ဆောင်ခွင့်ကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ယူရို 50 လျှော့စျေးဘောက်ချာကိုလည်း လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အခမဲ့ နှစ်ကြိမ်ပြန်ပေးနိုင်သည်။
Ventis ၏ရောက်ရှိမှုသည် စပိန်စျေးကွက်တွင် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။
စပိန်သို့ Ventis ရောက်ရှိလာမှုကြောင့်၊ စပိန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်များသည် ဤပလပ်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကို စတင်ကမ်းလှမ်းလာမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။. သိပ္ပံပညာ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် José Antonio Martínez Aguilar ၏ ပြောကြားချက်အရ၊ ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ခြေလှမ်းသစ်သည် တန်ဖိုးကွင်းဆက်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် ရှိနေနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Ventis မှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကို နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သို့ တင်ပို့နိုင်ရန် စပိန်အမှတ်တံဆိပ်များကို ကမ်းလှမ်းရန် အခွင့်အလမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ .
Ventis ၏ ငါးနှစ်တာသမိုင်းတစ်လျှောက်၊ အဆိုပါပလပ်ဖောင်းသည်အခြားနိုင်ငံများတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုလူသိများစေရန်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအီတလီကုမ္ပဏီများကိုရနိုင်ခဲ့သည်။. ဤနည်းအားဖြင့်၊ စျေးကွက်သည် လူများကို ပိုမိုလွယ်ကူသက်သာစွာ ဝယ်ယူနိုင်စေရုံသာမက ၎င်းတို့၏ နယ်နိမိတ်ပြင်ပတွင် ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကြီးထွားလာရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အမှတ်တံဆိပ်များကိုပါ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » ၎င်းသည် အီတလီဈေး Ventis ၏ စပိန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။